इडिट गरेर भिडियो लिक गराइ,प्रचण्डका पुर्ब बडी*गार्ड एसपीले किशोर श्रेष्ठ*लाई किन दिए भिडियो?? - Jerung Films
इडिट गरेर भिडियो लिक गराइ,प्रचण्डका पुर्ब बडी*गार्ड एसपीले किशोर श्रेष्ठ*लाई किन दिए भिडियो??
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, अहिलेका चित*वनका SP दानबहादुर मल्ल प्रचण्डका पुर्व बडीगार्ड हुन् । त्यतिबे*ला उनी डीएसपी थिए । प्रचण्डले आफ्नो जनमुक्ति सेना भन्दा बढी विश्वास मल्ललाई गर्दथे ।
पछि उनले काठमाडौ, दरबारमा*र्गको प्रहरी बृतमा काम गरे । सोही ठाउँबाट उनलाई पद्दोन्नति समेत मिल्यो र उनी SP भए । त्यसपछी उनलाई चितवनमा सरुवा गरियो ।
प्रचण्डले भरतपुरमा आफ्नी छोरी रेणुलाई मतपत्र च्यातेर मेयरमा जिता*उदा रबि लामिछानेले कार्यक्रम “सिधा कुरा जनतासंग” मार्फत सो कुराको चर्को बिरोध गरेका थिए ।
रबिसंग दुस्मनी लिने अ*र्का मुख्य पात्र हुन्, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ । श्रेष्ठ पहिले माओबादीको खुब बिरोध गर्थे तर प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको पद खाली भएपछि सो पद पाउनको लागि दिमाग लगाए । सो पद खाली हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले उनले प्रचण्डलाई फकाउन प्रचण्डको छोरा प्रकाश दाहा*लको अन्तर्बार्ता आफ्नो पत्रिकामा छापे । अनि अध्यक्ष बन्न
अध्यक्ष भएपछि उनले रबि लामिछाने अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नेपाल बसेको कुरा पत्ता लगाए । सो कुरा थाहा पाइसकेपछि उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर अध्यागमन बिभागलाई भनि रबि लामि*छानेलाई अमेरिका फर्काउन चिठी लेखे । त्यसपछि श्रेष्ठ र रबिको सम्बन्ध बिग्रियो ।
रबिले सो घटना पछि अमेरि*काको पासपोर्ट त्यागेर नेपाली नागरिकता लिए । र रबिले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत किशोर श्रेष्ठको विभिन्न कमजोरीहरुको पर्दाफास गरिदिए ।
किशोर श्रेष्ठले पावरको प्रयोग गरि भिआइपीले पाउने रातो पास*पोर्ट लिएका थिए । रातो पासपोर्ट भएपछी बिदेश आउदा/जादा सामान्य नागरिक भन्दा अलिक धेरै सुबिधा पाइन्छ । रबि लामिछानेले त्यस कुराको समेत रिपोर्ट बजाएपछी सरकारले उनको रातो पासपोर्ट खोसिदियो । त्यसपछि किशोर रबि सङ झन् रिसाए ।
अझ यो आत्महत्या*को बिषय हुनुभन्दा ४-५ दिन अगाडि उनले निर्मला पन्तको बलात्कार सम्बन्धि कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा पत्रकार पनि भनिने र नेता पनि भनिने खेम भण्डा*रीलाई कार्यक्रममा ल्याएर नाङेझार बनाएर पठाएका दिए । त्यसपछि उनी पनि रबि बिरुद्ध स्पष्ट रुपमा लागेको खेम भन्डारीका पछिल्ला फेसबुक स्ट्याटसमा देख्न सकिन्छ ।
– जहाँ प्रचण्डले चुनाब जितेका थिए । – जहाँ प्रचण्डका भुतपुर्व सु*रक्षा गार्ड प्रहरी प्रमुख छन् । – प्रचण्डकै दुईतिहाइ सरकार छ । – किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष छन् ।- सुदुरपश्चिमका मै हु भन्ने पत्रकार खेम भन्डारी संग रबिको भर्खरै झगडा परेको छ ।
अनि रबिलाई फसाउने मौका यो भन्दा राम्रो कुन हुन सक्ला त ? यो कान्ड रबि भर्से*स नेकपा (प्रचण्डवाला) हो भन्दा पनि फरक पर्दैन किनकी रबि बिरुद्ध खनिने अधिकान्स अरिङालहरु प्रचण्ड पक्षकै छन् । त्यसैले यो यथार्थ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । अब रवि लामिछानेलाई बचाउने जिम्मा हाम्रो ! सबैले सेयर गर्नुहोला !
अनि रबिलाई फसाउने मौका यो भन्दा राम्रो कुन हुन सक्ला त ? यो कान्ड रबि भर्से*स नेकपा (प्रचण्डवाला) हो भन्दा पनि फरक पर्दैन किनकी रबि बिरुद्ध खनिने अधिकान्स अरिङालहरु प्रचण्ड पक्षकै छन् । त्यसैले यो यथार्थ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।